डा.बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिव भन्छन् 'बन्दुक चलाउन प्रकाश दाहालबाटै सिकेँ' » Etajakhabar
डा.बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिव भन्छन् ‘बन्दुक चलाउन प्रकाश दाहालबाटै सिकेँ’
विश्वदीप पाण्डे डा. बाबुराम भट्टराईका स्वकीय सचिव भुल्नै नसक्ने ती यादहरू प्रकाश दाहालसँग मेरो भेट ०६० मा दिल्लीमा भएको हो । उनी अध्यक्ष प्रचण्डको हेडक्वार्टरमा बस्थे भने म डा. बाबुराम भट्टराईसँग । साथीभाइ भेट्दा घुलमिल हुने र रमाइलो गर्ने प्रकाशको बानी थियो । निकै फरासिला मान्छे ।
त्यस्ता थिएनन् प्रकाश सानैमा जनयुद्धमा हिँडेकाले प्रकाशले औपचारिक शिक्षा लिन पाएनन् । परिवार नै भूमिगत भएको थियो । बस्ने ठाउँ फेरिरहनुपर्ने भएकाले उनको पढाइमा ठेस लाग्यो । औपचारिक अध्ययनमा कमी भए पनि विचारमा उनी उच्च थिए । मैले जति संगत गरेँ, उनमा कुनै खराबी पाइनँ ।
प्रचण्ड–बाबुराम मिलाउने प्रयास पछिल्लो समय प्रचण्ड र बाबुरामबीच निकै अन्तरविरोध चुलियो । बाबुरामले माओवादी पार्टी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति गठन गरेपछि उहाँहरूबीचको दूरी निकै टाढा भयो । हामीबीच पनि सम्बन्धमा दरार पैदा होलाजस्तो भयो । प्रचण्ड र बाबुराम फरक–फरक रहेर हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पछिल्लो समय हामी दुवै पुगेका थियौँ । सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट हामीले मिलाउने प्रयत्न गरिरहेका थियौँ । उहाँहरूलाई मिलाउने कामको पुल बनिरहेका थियौँ । अफसोच ! दुईजनाले गरिरहेको यो काम अधुरै रहन गयो । प्रकाशको असामयिक निधनले प्रचण्ड र बाबुराम मिलाउने काममा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
०६० मा पहिलोपटक आपसमा भेट भएका हाम्रो सम्बन्ध अन्त्यसम्म नै राम्रो रह्यो । विभिन्न मोडमा जनयुद्धदेखि नै प्रचण्ड र बाबुरामबीच वैचारिक विवाद हुँदै आयो । अहिले त फरक पार्टीमै हुनुहुन्छ । तर, नेताको द्वन्द्वले हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धमा कहिल्यै दरार निम्त्याएन। हतियार चलाउन उत्तिकै निपुण जनयुद्धको समयमा ठूला नेताको सुरक्षार्थ पनि हतियार चलाउनुपर्ने भयो । तर, सुरुमा मलाई हतियारसम्बन्धी ज्ञान नै थिएन । मलाई हतियार खेलाउन सिकाउने गुरु प्रकाश नै थिए । उनी सबै प्रकारका हतियार चलाउन जान्दथे । प्रकाश प्राविधिक विषयमा निकै जान्ने भएकाले पनि नयाँ–नयाँ प्रकारका हतियार पाउनेबित्तिकै मलाई पनि चलाउन सिकाउँथे । म पनि निकै चाख मानेर सिक्थेँ । युद्धकालीन समयमा माओवादीका नेताहरूले स्याटेलाइट फोन चलाउँथे । मलाई त्यो फोन चलाउन आउँदैन थियो । हामी निकै मिल्ने साथी थियौँ । त्यसैले पनि उनले मलाई स्याटेलाइट फोन चलाउन सिकाएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ०७, २०७४ समय: ८:५२:१६
रवि लामिछानेकाे आलाेचना गरेर आफु चर्चित हुने निन्जा टेक्निक गरेर दिवास्वप्ना नदेखेकै राम्राे
के अब संघियता सफल हुन्छ त ? थुप्रै छन् चुनौती
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् द्वन्द्वपीडितले